Apg29 eji kuki.
Site achọ ihe Apg29 na-eji ya atụmatụ, ị na-ekweta na ojiji nke kuki.
Apg29 eji kuki. Kuki na Swedish. Ọ bụ maka na peeji nke na-arụ ọrụ nke ọma ma na maka a mma ọrụ ahụmahụ.
Tinyere ihe ndị ọzọ, kuki n'ụdị comments gị na mpaghara na-enwe ike ịzọpụta gị aha na e-mail ka ị ghara ju ya oge ọ bụla ị dee a ikwu. Your email na aha (ma ọ bụ na aha njirimara) na-echekwara na a nchekwa data na O doro anya na ọ bụghị ka ọha na eze. Kuki na-eji na-Google ọnụ ọgụgụ.
Kuki ndị bụ obere faịlụ na-echekwara na mpaghara na kọmputa gị. Ọ bụghị a achicha i nwere ike iri. ;) Ị nwere ike ịtọ gị nchọgharị otú ị chọrọ ndị a faịlụ na-arụ ọrụ, ma na ị chọrọ ha ma ọ bụ. Gbanyụọ kpamkpam na ngwá ọrụ dị ka ọ bụ ihe ize ndụ na peeji a na-adịghị arụ ọrụ dị ka bu n'obi.
Iwu na Electronic Communications gbanwere July 1, 2011. A afọ mbụ, ndị ọchịchị wee na aro na data nwere ike na-Ewepụtara site na ịchekwa ọnụ akụrụngwa na onye ọrụ nkwenye - ugbua, ọrụ ga-asian banyere nzube nke kuki.
Tupu ọ bụ nnọọ ezu ka dị nnọọ agwa eji ọkụ nke na ozi ma anakọtara site na ma ọ bụ echekwara na ha kọmputa - na kuki iwu, ka ka Chapter 6. § 18, ọ bụ ezughị nnọọ agwa eji ọkụ, ugbu a na-eji ọkụ na-ekweta na ihe ndị ozi-Ewepụtara site ma ọ bụ echekwara na ha na ngwaọrụ. Kuki The iwu e mere iji mata nke ihe na-echekwara na otu kọmputa.
Ị nwere ike pịa kwụsịrị info banner n'okpuru banyere kuki, pịa "M na-aghọta" ma nọgide na-achọ ndị Apg29.
Biko kpọtụrụ m ma ọ bụrụ na i nwere ajụjụ na a ma ọ bụ dee na-aza ajụjụ n'okpuru.
Daalụ maka na ịga na blog saịtị Apg29.Nu!